Iziganeko zokuqala zeMagama eziNyanisekileyo kunye nokuthobeka
Imvelaphi yegama elinyanisekileyo liphikisana, nangona i-etymology eyaziwayo ivela kumagama athi 'ngaphandle kwexeni.'
Kukholelwa ukuba inyaniso ivela kumagama amabini aseLatini - 'ngaphandle' kunye ne- 'era '. Nangona le nto inzima inzima, kukho iinkcazo ezimbini zokuthi 'ngaphandle kwe-wax' yintoni ibango elibalulekileyo, bobabini ababandakanya ingcweti, ebudeni beRiphabliki yaseRoma, ngokuqhelekileyo babekhoboka okanye abavela kwamanye amazwe.
Abanye bacinga ukuba abasebenzi beempawu zeempawu zeemerald baya kubhalela ukungapheleli kwitye nge-wax, njengokuba abenzi bezindlu zanamhlanje okanye abathengisi be-antitique abangenangqiqo banokugubungela i-wax ukuze bafihle ngokutsha kwi-wood.
Enye imbono yokuba imvelaphi ye 'intliziyo' inemiphumo embi. Ekubeni i-samente yayingabizi kakhulu kune-wax, ngamatye amaxesha abasebenzisa izitini bangayisebenzisi-ubuncinane ibali. Xa iyanyibilika, izitena zingatshintsha kwaye izakhiwo ziyawa. Ngoko ibango lokuba into ethi 'sine cera' yayiza kubakho isiqinisekiso esibalulekileyo.
I-Online Etymology Dictionary ithi inokuvela kwi- sem-, sin- , izimpande ze- 'unye 'kunye ne- crescere ' ukukhula '.
Iindawo kwi Iliad
Inkxwaleko yamandulo yaseGrike: Ukubeka iSiteji
Ukulungiswa koHlahlo lwabiwo-mali
Iimpawu zeVital Virgin zaseUnited States - Ukuzalwa, Ukufa, Umtshato kunye neNtshato
Uthi kuchazwa njani iTrapeic Mulatto?
7 Iintlobo eziqhelekileyo zemithi eNtshona Melika
Ama-50 abafazi abangabikhoyo abaxhamene noMbulali onguMnxeba uWilliam Bradford
Kutheni iKrisimesi Imithi ivumba kakhulu
I-Cryolophosaurus, "iCold Crested Lizard"
I-44 izandile ngolwimi lwesiNgesi
ISANCHEZ Igama lomnqophiso kunye nomthombo
Imfazwe Yomthonyama yaseMerika: iMfazwe yaseFort Wagner
"Ukuvuma" nguJohn Grisham
KwiiNkcukacha zamaRoma kunye nezikhumbuzo